INetflix Shares New Stranger Things Season 4 Teaser, Iqinisekisa Ukukhishwa Kwama-2022 - Isiko Lopop
INetflix Shares New Stranger Things Season 4 Teaser, Iqinisekisa Ukukhishwa Kwama-2022
Kungekudala ngemuva kokuthi umqondisi ophrojusa uShawn Levy aqinisekise ukuthi abalandeli bazobe bezwa okuningi ngalo Isihambi Izinto Isizini 4 kungekudala, iNetflix isiveze okusha okufundisayo.
Ifaka ukukhanya okufishane kwesizini entsha, kufaka phakathi ukubukeka kwe-Eleven evinjelwe kanye no-Jim Hopper ohlinzeka nge-flamethrower, lo teaser naye uza eceleni kwesiqinisekiso sokuthi isizini entsha izofika ngonyaka ozayo. Kube ukulinda isikhathi eside kubalandeli, ngesizini edlule iqala ukubonakala ngo-2019, kepha wonke umuntu othintekayo uthembise ukuthi kuzolifanele igebe elide phakathi kwezinkathi.
Ngenkathi okunye ukubambezeleka kungabangelwa ubhadane lwe-COVID-19, oluvala ukukhishwa kwe-TV namabhayisikobho kakhulu ngonyaka we-2020, umqondisi nomkhiqizi omkhulu uShawn Levy usanda kukhomba ukuthi ingxenye yesizathu sokulinda isikhathi eside kungenxa yokuthi umbukiso uzimisele kangakanani ithole. 'Ngidubule eLithuania ngaphambi kwalolu bhubhane. Siqophe eGeorgia, eLithuania naseNew Mexico, ngakho-ke kwanele ukusho ukuthi iSizini 4 iyanda, kusho uShawn Levy etshela okuhlukahlukene ngenyanga edlule. Ukuvelela kwayo okubukekayo nokulandisayo, okuvelele kakhulu kunezinkathi ezintathu zangaphambilini.
indawo engcono yokuthenga ubuso basenyakatho
I-teaser ayinikeli okuningi ngokuya ngezindawo ezintsha, kepha abalandeli sebevele bazi kahle ukuthi uDavid Harbors Jim Hopper wagcina ukubonwa eRussia. Akunakusho ukuthi, lezi zindawo zizoba nezindawo eziningi kulokhu, futhi futhi omunye umthamo onempilo we-80s-tastic fashion, nawo.
Bukela i-teaser entsha engenhla.
basashadile u-lala no-carmelo anthony
yini ongayengeza ebhokisini lekhekhe lebhokisi
injabulo yokudweba kuma-pbs
iresiphi ye-icing ngokhilimu we-tartar